Baabuur Ay La Socdeen Koox Fanaaniinna Oo Gubtay | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Baabuur Ay La Socdeen Koox Fanaaniinna Oo Gubtay
Daarasalaam (SDWO): Baabuur ay la socdeen koox fanaaniin ah oo hawlo wacyigelineed u tegay degmadda Daarasaal ee woqooyiga Hargaysa ayaa baabuurkii ay wateen gebi ahaanba uu shuf-beelay.
Kadib markii uu Dab ka kacay qaybta Baateriga gaadhigaasi, kaasoo ku sii fiday qaybaha kale ee baabuurka aakhirkiina sababay in uu gubto gaadhigaasi oo noociisu ahaa Land Cruiser.
Dhacdadani ayaa gelinkii danbe ee maanta ka dhacday duleedka koonfureed ee degmadda Daarasalaam oo ka tirsan gobolka Maroodijeex.
Kooxdan fanaaniinta ayaa u jeedadda safarka ay ku joogeen degaanka Daarasalaam waxa uu ahaa iyagoo fulinayay barnaamij la xidhiidhay wacyigelinta tallaalka xanuunka Jadeecadda oo ay u dirtay wasaaradda caafimaadka Somaliland.
Hase yeeshee markii ay soo dhamaysteen hawshoodda wacyigelinta ahayd xili ay ku soo jeedeen caasimadda Hargaysa ayaa Dab ka dhashay qaybta baabuurka laftiisa, kaasoo dhaliyay gubashadda gaadhigaasi.
Inkastoo aanay jirin wax dhibaato ah oo ka soo gaadhay kooxdii saarnayd. Sida uu noo xaqijiyay Bushaar Saleebaan Xasan (Bushaar-famous), oo ah Muusishan ka tirsan koox faneedka Xidigaha Geeska iyo waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta Somaliland, isla markaana la socday kooxdan fanaaniinta ahaa ee uu baabuurku ka gubtay oo caawa dhacdadaasi uga waramay shebekadda SDWO.
Isagoo sharaxaad ka bixinayay sida wax u dhaceen waxa uu yidhi “Markii aanu soo noqonay, soona dhamaysanay barnaamijkayagii, ee aanu u soo jeednay dhinaca caasimadda Hargaysa ayaa gaadhigii aanu waday uu Dab ka kacay, kaasoo ka dhashay qaybta Baateriga ee baabuurka.
Kadibna Dabkii ayaa ku sii fiday qaybihii kale ee gaadhiga, iyadoo aakhirkiina gebi ahaanba uu sidaas ku bas-beelay, kuna gubtay baabuurkaasi”.
kooxdan fanaaniinta ah waxaa hogaaminayay abwaan Axmed Saleebaan Bidde, kuwaasoo isugu jiray jileyaal, muusikaysteyaal, heesaa iyo xubno kale. Sidoo kale gaadhigaasi oo noociisu ahaa Land Cruiser waxaa iska lahaa abwaan Axmed Saleebaan Bidde.
Geesta kale Muusishan Bushaar Famous, waxa uu tilmaamay inay isku deyeen sidii ay u demin lahaa Dabka ka kacay gaadhiga, balse Dabka oo xoog badnaa awgeed aanay ku guulaysan in ay demiyaan.
Bushaar Famous, waxa kaloo uu sheegay in markii gaadhigii ay ku safrayeen uu gubtay in ay qaylo doon u soo dirteen dhinaca Hargaysa, gaar ahaana wasaaradda caafimaadka si baabuur kale loogu soo diro.
Balse intii aanu soo gaadhin baabuurkii ay wasaaradda caafimaadku u dirtay ayaa gaadhi kale oo ka yimid dhinaca degmadda Daarasalaam ee ay barnaamijka wacyigelinta ah ku dhigayeen uu ku soo maray goobtii uu gaadhigu kaga gubtay.
Iyadoo uu baabuurkaasi soo qaaday, sidaasina ku keenay magaaladda Hargaysa oo ay ku soo socdeen kooxdaasi fanaaniinta ah.
Ma aha markii u horaysay oo sidan oo kale baabuur ay dad ku safrayaan uu ka gubto weliba dab gaadhiga laftiisa ka dhashay, laakiin dhacdadani ayaa kaga duwan kuwii hore loo arki jiray, in baabuur ay koox fanaaniin ah ku safrayeen uu ka gubto.
Daawo Muuqaalka Gubashadii Gaadhiga: